CBD Strawberry solika | Tincture CBD Flavored 2021 tsara indrindra
CBD Strawberry solika
Home / menaka / Strawberry solika CBD
Size Fidio ny safidy500 mg1000 mg2500 mg Clear
Ny habetsahan'ny voahosotra solika CBD
SKU frezy-menaka SOKAJY menaka
TRYTRANQUIL.NET CBD OIL STRAWBERRY
Mamy sy mahasalama ary matsiro foana, ny huilan'ny CBD misy tsiranoka Strawberry dia iray amin'ireo be mpitia indrindra eto aminay, ny trytranquil.net CBD Oil Strawberry na CBD Oil Tincture dia fomba mamy sy mahomby hankafy ny lokon'ny CBD voasedra an'ny antoko fahatelo.
Ny tsiranon-tsolika CBD Oil Strawberry dia misy ao 500mg, 1000mg, ary 2500mg Safidy hery CBD, ny Trytranquil.net Menaka CBD Strawberry CBD Tincture dia fomba tsara hanampiana ny CBD amin'ny fanaonao isan'andro na mampiasa menaka CBD ianao amin'ny fampihetseham-batana na fanamaivanana ny fanaintainana.
Menaka trytranqul CBD sy tincture amboarina ao Etazonia amin'ny alàlan'ny solika CBD feno karazany feno naoty ambany noho ny 0.3% THC.
Omeo Trytranquil.net Strawberry CBD Tincture na iray amin'ireo vokatra CBD amidinay tsara indrindra ary miomàna hahita izay antony ilain'ny atleta ambony Floyd Mayweather antsoy izahay ny vokatra CBD tsara indrindra misy.
2500mg / 30ml
Menaka hemp Phytocannabinoid-be hemp (0.3% THC)
Triglycerides Chain Medium (Menaka MCT), Flavola mifototra amin'ny solika Strawberry.
Alohan'ny hampiasana ny diloilo sy ny tinture CBD dia ataovy izay hampihorohoroana tsara ilay tavoahangy. Fenoy feno ilay boatin-drano. Atsaharo ny lelanao eo ambanin'ny lelanao. Tazomy ao ambany ny lelanao ilay ranoka CBD mandritra ny iray minitra ary avy eo mitelina. Fomba iray hafa ampiasaina amin'ny menaka CBD ny manampy azy amin'ny sakafo na zava-pisotro tianao.
Torohevitra CBD matihanina: Miasa tsara miaraka amin'ny Trytranquil.net ny solika CBD misy frezy Mofomamy CBD, na ny Trytranquil.net anay Roll-On an'ny solika CBD.